Global Voices teny Malagasy · 10 Aogositra 2015
10 Aogositra 2015
Tantara tamin'ny 10 Aogositra 2015
Ahoana No Tsy Anatrehana Fanonganam-Panjakana
Karaiba10 Aogositra 2015
Fotoanan'ny " Taiza ianao tamin'ny namonoana an'i JFK" an'i Trinite sy Tobago, ny fanandramana fanonganam-panjakana ny 27 Jolay 1990. Fa ahoana raha tsy teo amin'ny firenena ianao tamin'izany fotoana izany?
Afrika Mainty10 Aogositra 2015
Nisy fahatapahan-jiro efa ho nanerana ny firenena mihitsy tao Zambia tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nitondra tamin'ny fanenàna goavana ny famatsiana herinaratra tao amin'ny firenena. Misy fisehonà "fahatapahan-jiro" vaovao indray manandrakandrana ireo mpanjifa sy ireo mpiasa.
Taom-bolamenan'ny firenena mampanembona ny Singapaoreana ao amin'ny aterineto
Azia Atsinanana10 Aogositra 2015
"Ny tanjona voalohany dia ny hamelomana indray ny tsiaron'ireo taranaka taloha sy hampiditra amin'ireo tanora ny tantara lalin'ny Tanànan'ny Liona sy ny fisandratany mankany amin'ny fahombiazana."
Pejin'ny shinglisy iray nambabo an'i Hong Kong tao anatin'ny indray alina
Resin'ity revy vaovao ity indray ny teny vary amin'akotry izay heverin'ny maro ho vary amin'anana mahazatra antsika malagasy.
Tanzaniana Mpamboly Ireo Olo-malaza Vaovaon'ny Televiziôna Mampiseho Ny Fiainana Andavan'andro
Fampisehoana amin'ny Televiziôna Tanzaniana, vokarin'ny Oxfam ny "Vehivavy Maherifon'ny Sakafo", mitady izay hanomezana hery sy hampianarana ireo vehivavy any ambanivohitra izay mampisakafo ny ankamaroan'ireo fianakaviana any amin'ny firenena Afrikana.